Khuphela i-BDSM Iiklip zevidiyo kunye namaSm Movie kwi-Free | Ubhulogi obukhulu kakhulu
Iintsika zeSlave Graphic Food Crushing with Ab ...
Eli candelo lizinikezelwe kwi-BDSM! Unokukhuphela iividiyo zeBDSM kunye nomboniso apha. Abantu bafumana i-BDSM ngokukrakra ngokukhawuleza ngezizathu ezahlukeneyo. Abanye banandipha le ntliziyo yokuba bangenamandla kwaye bayazithobela, abanye banandipha uxolo loxinzelelo oluza nalo. Kukho izizathu ezininzi zokukhuphela i-BDSM iphonografi kwaye uyayivuyela, ngoko akunakucingela.
Eli candelo leformenti lethu elimangalisa le-porn likuvumela ukuba ujabulele amavidiyo angaphandle kwama-BDSM. Uyazi nje ukuba kutheni abantu bakha i-BDSM yokuphila. Abanye baxeliswa kwaye baphoqelelwe ngulo mntwana omangalisayo. Abanye bafuna ukucocela ubomi babo bobulili, abanye bahlolisisa ngesondo kwaye bazama yonke into / nayiphi na into entsha. Abanye bathi yindlela enhle yokujongana neengxaki zakho. Kuvusa nje, kuyinto enomdla kwaye kunomnye umngeni kwaye ekugqibeleni kukuxhobisa, ukuba ngokwenene-ufuna ngokwenene ukufikelela phantsi kwelo nto. Ngako-ke kukho izizathu ezininzi zokuthi kutheni unokonwabela i-BDSM ebomini bokwenene, ngoko kutheni ungayi kuvuya kwividiyo ze-BDSM? Kubonakala ngathi akukho-brainer, ngenxa yokuba i-BDSM i-hawt!
Apha uya kufumana ukufikelela okungenamkhawulo kwiqoqo lethu levidiyo yeBDSM. Akuthi nje ithetha ividiyo yeBDSM apha napha, hayi. Iqoqo lethu lokuqokelelwa ngokuqinileyo lenzelwe ukusetyenziswa komsebenzisi, ngoko kuthetha ukuba iqela labantu abafana nomntu badibanisa ukudala into ekhethekileyo neyolisayo. Awunakuze ubone amanqaku amaninzi eBDSM kwindawo enye. Kwaye sijamelane nalo, awuzange ubonise amanqaku amaninzi aphezulu kwi-BDSM kwindawo enye. Asinayo nje iifilimu zakho ezidumile, eziphezulu ze-BDSM ozibonayo amaxesha ambalwa sele sele sele. Siye ngaphantsi kwezicatshulwa, iimpawu ezifihliweyo kunye nento. Konke kukukhuthaza ngokukhawuleza, ukuba ucinga ngoku. Ngenxa yefomathi, awukwazi ukuba uza kufumana ntoni ixesha elizayo xa uhlola le bhodi yeBDSM yethu.
Iindidi ngokwenene zixhamla. Ukuba unalo uhlobo lwe-niche kink okanye nayiphi na into, unokuba nethemba kwiividiyo ezinxulumene nemfihlo yakho engcolileyo. Awunakuze ucinge ukuba ungakanani umgudu wempuphu. Ngoko ke, ukuba unomdla kwividiyo ze-BDSM kwaye ungakhathazeki ukufumana izinto ezikhululekile ngosuku ngalunye, le bhodi ikuyo. Enyanisweni, kusenokuba yinto yakho entsha ye-intanethi ekhaya. Ngoba kutheni? Akukho nto i-kink-shaming apha, sonke sinokufanayo. Ukufunda incwadi efanayo, kwiphepha elifanayo, nantoni na onokuyibiza. Jabulela, khupha izinto ezikhululekile, ube yinxalenye yoluntu. Musa ukuchitha ixesha lakho kufuna i-BDSM ephakamileyo kwiphina indawo, kuba yonke into iyalinganiswa nokuqokelela kwethu. Ukuqokelela okuqhubekayo kunye nokuguquka, sonke sibonga kwisiseko sethu somsebenzisi. Ngoko, ungacingi kanzima malunga nayo - vele ujoyine, uhlolisise kwaye uthathe inxaxheba.
Into yokugqibela esinokuyithetha ngayo, ukuba mhlawumbi ingagxininiswa kakuhle: yonke into oyibonayo ngaphambi kokuba ukhululeke ukukhuphela kwaye ukhululeke ukuzonwabisa. Nokuba umxholo unqabile ngqo kwi-payout edibeneyo, ngokupheleleyo, ngokukhululekile, ngoko uya kuthanda. Umrhumo wobulungu awunakho, ngoko ke yintoni esiyilindele isihogo?
Ubhulogi obukhulu kakhulu > Blog > Umboniso > BDSM